Mabhedha eZvipatara Ari Kutengeswa, Magetsi Mabhedha Emabhedha Mitengo - Annecy
Bhuku remubhedha muchipatara
Eletric chipatara mubhedha
Mubhedha wekuchengeta kumba
Orthopedics traction mubhedha
Chipatara mubhedha zvishongedzo
Murwere rekodhi trolley
Simbi isina trolley
Stainless simbi chiridzwa
Stainless simbi kwesha singi
Yevarwere Transfer Trolley
Hydraulic kuchinjisa trolley
Chinyorwa chekuchinjisa trolley
Zvimwe zvigadzirwa zvekutanga zvekubatsira
CHIRWERE CHITSANANGIRA TROLLEY
Annecy Machinery yakatanga muna 2012, kubva mukugadzira mabhedha emuchipatara, ndokuzowedzisa mutsara wese wemidziyo yechipatara. Iye zvino tave indasitiri uye tinotengesa yakamisikidzwa kambani yekupa vatengi imwe mira yekutenga. Zvigadzirwa zvedu zvinosanganisira: zvivakwa zvemuchipatara, zvekuvhiya uye zvigadzirwa zve emergency.
Mushure mekusimudzira kweanopfuura makore masere, Annecy aive nevashandi vanopfuura zana, mairi, vashandi vehunyanzvi nehunyanzvi vanhu vanopfuura gumi, Assets akatenderedza kusvika 1, 000,000USD nzvimbo yekuvaka iri 2000square metres.
1. Kana basa rekuruboshwe nerokurudyi rodikanwa, pamusoro pemubhedha panofanira kunge paine chinzvimbo chakatwasuka. Saizvozvowo, kana mubhedha wekumashure uchisimudzwa uye uchidzikiswa, iwo wemubhedha wepadivi unofanirwa kudzikiswa panzvimbo yakatwasuka. 2. Usafambisa mumigwagwa isina kuenzana, uye ita ...
1. Usati washandisa mubhedha wezvokurapa wakawanda-wanda, tanga watarisa kana tambo yemagetsi yakanyatsobatana. Kunyangwe iyo tambo tambo yakavimbika. 2. Tambo netambo yesimba yemutsetse actuator yemutongi haifanire kuiswa pakati pekusimudza chinongedzo nemubhedha wepamusoro uye wezasi ...
1. Kuchengeteka uye kugadzikana kwemibhedha yekuyamwisa. Mubhedha wevacheche wakajairika ndewemurwere ane mashoma kufamba uye akarara pamubhedha kwenguva refu. Izvi zvinoisa kumberi kwakakwirira zvinodiwa kwekuchengetedza uye kugadzikana kwemubhedha. Mushandisi anofanira kupa chitupa chekunyoresa uye rezinesi rekugadzira o ...
AC-AS009 Chipatara emergency amburenzi mubhedha ...
Gynecological tafura AC-GEB001
AC-ST002 Murwere Anotambanudza Trolley Ngoro
AC-MB018 Rimwe Rinoshanda Medical Chipatara Mubhedha Mari
AC-MB016 Mabasa maviri Ekurapa Chipatara Mubhedha We ...
AC-MB009 Mabasa matatu Ekurapa Murwere Hospit ...
AC-ET027 Emergency Chipatara Trolley Ngoro
AC-ET013 Emergency Trolley Tsaona Ngoro
Chiremba Trolley Cart, Trolley Chiremba, Chipatara Trolley, Laptop Trolley, Wireless Nursing Trolley, Medical Trolley Nemadhirowa,